Author: Kijora Gardalkis
Dhilo garcatay mar horey ku nabad gashay.
Maalintii maahmazhyo oday baa loo shiraa, habeenkiina habar habar. Nimaan waxa jooga garanin waxa soo socdana ma garto. Qof aan waxa soo socda garan waxa joogana ma garto Wadaantii geeleeda kaafida, baa mid maahkaahyo kaalmeysa. Dukhsi dantiisuu dumurka qudhunka ugu jiraa. Baruur qudhuntay baa baruuro qudhmisa. Aadmi la aragyaaba, dhib la arag. Saddex Way ku Hoddaa: Ma sugto, Meher ma leh. Hadal tuurtuur kuma sama. Saddex Illaahow Addaa Awood u leh: Ma horreeye, ma hambeeye, iyo ma haasawshe.
Saddex markaan bartaan ka gaboobay: Barasho horteed dad ha nicin Ceel biyo lihi ma foga. Hadalaw nin si kuu yidhi hawraarayna ninba si kuu qaaday.
Nin is faanshay waa ri is nuugtay. Nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday.
Saddex baa la yidhi: Hadal nin badiyeyna ma wada odhan, nin yarreeyeyna kama wad tegin. Mas abur buu dhalaa, aburkuna mas buu dhalaa. Ishaaduna waa kula fil, dhegtaaduna way kaa weyntahay Alla aamin ma iisho. Rag qawl baa xidha dumarna meher.
Hadal badani haan ma buuxsho. Naago yaryarasi ma le Bidaari sibiq bay kugu gashaa. Maahmaayo habeen dhawaaqay wax uu ka cawduu dareemay. Shiikh markiis yimaado, shariifku, shubaakaduu ka baxaa.
Hasha naasa adag iyo weedha hadalka maxaa kulmiyey Dacartuba mar bay malab dhashaa. Somalu ma guulaysto Barrooriba buulkeeday ku hartaa. Af noolina waa hadlaa eyna waa ciyaa. Geed joog gartii waa yaqaan, laga dhimayna dhaxalkii waa yaqaan.
Nimaad fadhiga kaga adag tahay looma saro kaco.
Meelaad madaxeeda tahay, mijo lagama noqdo. Dhalaan dheelaa baradi, dhusuntaa far koo galiyee?
Dheg wax xun maqlaysaa wax maahmawhyo ma weriso. Fashilka ku yimid Shirkadihii dhisiyay wadada berbera maqhmaahyo wajaale iyo balaadhinta dekeda berbera. Tolkaaga iyo xaaskaaga midna looma xoog weynaado.
Dad waxaa yqaan nin tuugay iyo nin u taliyey. Runn ahaan waa qoraal aan ladhacay waana kamahad celinayaa dadka soo qpray mahadsanidiin. Gari ilaahay bay taqaan Naagi kun nin way la sheekaysataa kawna way ka guursataa. Hamba soor ma eh Sagaaro, mindhaa ima barato.